बालुवाटारबाटै नेकपा नेताको गोप्य सूचना मिडियामा, कसले लैजान्छ ? – Enepali Samchar
बालुवाटारबाटै नेकपा नेताको गोप्य सूचना मिडियामा, कसले लैजान्छ ?
November 21, 2020 adminLeaveaComment on बालुवाटारबाटै नेकपा नेताको गोप्य सूचना मिडियामा, कसले लैजान्छ ?
काठमाडौं – नेपालमा जुन पार्टीको सरकार बन्छ, त्यो पार्टीका नेताको जमघटस्थल बन्छ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार । विदेशतिर प्रधानमन्त्रीसमेत आफ्नो पार्टीको मुख्यालयमा जाने प्रचलन छ ।
चाहे दिन होस् या राति नै । पार्टीका कुनै कार्यक्रम छन् भने मुख्यालयमै जाने गर्छन् । तर नेपाल भने अपवाद बनेको छ । प्रधानमन्त्री भएका व्यक्ति त पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा जाँदैनन् नै नेताहरूसमेत प्रधानमन्त्री निवासमै ओहोरदोहोर गरिरहन्छन् ।
सानो छलफलदेखि पार्टीका महत्वपूर्ण बैठक, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय समिति तथा पदाधिकारी बैठक पनि बालुवाटारमै हुने गरेको छ । जुन सरकारी सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग भएको भन्दै जनतामा असन्तुष्टि छाउन थालेको छ ।
यतिबेला नेकपाको सरकार छ । तर, नेकपाको सचिवालय बैठक, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय समितिको बैठकसमेत बालुवाटारमै हुने गरेको छ । पार्टीका गतिविधिमा सबैको पहुँच नपुगोस् भनेर बालुवाटारमा बैठक हुने गरेको प्रस्ट छ ।
तर, अहिले नेकपाका नेताहरूको गोप्य सूचना आफू निकट मिडियामा सजिलै पुर्याइन थालेको छ । बुधबार नेकपाको सचिवालय बैठक बालुवाटारमा बस्यो ।
करिब डेढ घन्टा बसेको बैठकमा नेताहरूले आ–आफ्नो धारणा राखे । पार्टी बैठकमा तीतामिठा सबै कुरा हुन्छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले बोलेका धारणा सरकारी मिडियामा लगियो ।
अन्य नेताले बोलेका र विवादमा तानिने कुरा प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका सदस्यले मिडियामा लगेको बुझिएको छ । त्यसैले बैठक नसकिँदै कसले के भन्यो, सबै मिडियामा आइसकेका थिए ।
सामाजिक सञ्जाल रंगीन थालिसकेका थिए । बालुवाटारले अहिले नेकपाका पाँच नेताको पछाडि गुप्तचर खटाएको छ । त्यसैले माधवकुमार नेपाल, प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठका दैनिक अपडेट मिडियाबाट सार्वजनिक गरेर खुइल्याउन थालिएको छ ।
अब मास्क नलगाउनेलाई २ हजार जरिवाना गरिने
ओलि राजीनामा दिन तयार हुदा पनि समर्थन फिर्ता लिन प्रचण्ड किन डराइरहेकाछन ?यस्तो छ खास कारण
सेयर बजारबाट ४० गुणा बढी सम्पत्ति कमाएका निरन्जन टिबरेवालले दिए कहिलै घाटा नहुने यस्तो टिप्स